ပျက်စီးမွဲခြောက်နေတဲ့ ဆံသားတွေအတွက် လွယ်ကူအသုံးဝင်တဲ့ ဒိန်ချဉ်ပေါင်းဆေး
30 Aug 2018 . 4:37 PM
ဆံပင်က သင့်အတွက်တော့ ဒုတိယမျက်နှာပါ။ ဆံသားလေးတွေ တောက်ပြောင်ပြီး သန်စွမ်းနေမှ ကြည့်လို့လှသလို ဆံပင်ပုံစံ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိခြင်းက လူတစ်ယောက်အတွက် တကယ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဆံပင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အလိုမကျရတာ၊ စိတ်ရှုပ် စိတ်ညစ်ရတာ အများကြီးပါ။ အထူးသဖြင့် ဆံသားပျက်စီးမွဲခြောက်တာက အဖြစ်အများဆုံးပေါ့။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဟိုဟာကောင်းနိုး၊ ဒီဟာကောင်းနိုးနဲ့ လိုက်စမ်းရင်း ထိထိရောက်ရောက် မဖြစ်တာတွေလည်း ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ ဒိန်ချဉ် ရှိရင်ကို လုံလောက်ပါပြီ။ ဒိန်ချဉ် တစ်မျိုးတည်းနဲ့ တကယ်အလုပ်ဖြစ်ပါ့မလား။ ကဲ..စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
hair shampoo and conditioner
လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ကိုယ်ရဲ့ ဆံပင်အနေအထားနဲ့ လုံလောက်မယ့် ဒိန်ချဉ်စစ်စစ် (သကြားရည်၊ပျားရည် စတဲ့ အချိုတွေ မရောထားတဲ့ သီးသန့် ဒိန်ချဉ်အနှစ်) ၊ကိုယ် သုံးနေကျ Shampoo and conditioner ပဲ လိုပါတယ်။
နည်းလမ်းကတော့ အရင်ဆုံး ခေါင်းမလျှော်ခင် တစ်ခေါင်းလုံးကို ဒိန်ချဉ် ခပ်ထူထူလိမ်းရပါမယ်။အထူးသဖြင့် ပျက်စီးနေပြီး နှစ်ခွဖြစ်တတ်တဲ့ အဖျားတွေကို ခပ်ထူထူလေးလိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်သလို လိမ်းသွားပြီးရင် မိနစ် ၂၀ လောက် Shower Cap လေးဆောင်းပြီး ပေါင်းထားပေးပါ။ ဒိန်ချဉ်တွေက စီးကျပြီး မျက်လုံးထဲဝင်ရင် စပ်တတ်လို့ Shower Cap သေချာအုပ်ပြီး ပေါင်းတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
using shower cap
မိနစ် ၂၀ ပြည့်သွားရင်တော့ ဒိန်ချဉ်တွေ ပြောင်စင်အောင် ရေတစ်ထပ်နဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ ပြီးမှ ကိုယ်သုံးနေကျ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ပြောင်စင်အောင် ခေါင်းလျှော်ချရပါမယ်။ ပိုပြီး ကောင်းမွန်ချင်ရင်တော့ သုံးနေကျ Conditioner လေးနဲ့ ခဏ ထပ်ပေါင်းပေးလိုက်ပါ။ ခေါင်းလျှော်ပြီးdryerမှုတ်တဲ့အခါ ပုံသွင်းစရာမလိုဘဲဆံသားက ပုံကျသွားသလို ပြောင်ပြောင်စင်းစင်းအိအိလေး ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ ဆံပင်အဖျားက ကြမ်းတမ်းတာတွေလည်း လျော့ပါးသွားသလို တပတ်တခါ ပုံမှန်လုပ်ပေးရင် ဆံပင်ကျွတ်တာလည်း သက်သာလာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းလမ်းက တကယ်ကိုထိရောက်သလို အကုန်အကျလည်း သက်သာ၊အချိန်လည်း များများမပေးရလို့ လုပ်ကို လုပ်ကြည့်သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။
Photo Credit – InStyle
Su Yi Htet (Akhayar)
ပကျြစီးမှဲခွောကျနတေဲ့ ဆံသားတှအေတှကျ လှယျကူအသုံးဝငျတဲ့ ဒိနျခဉျြပေါငျးဆေး
ဆံပငျက သငျ့အတှကျတော့ ဒုတိယမကျြနှာပါ။ ဆံသားလေးတှေ တောကျပွောငျပွီး သနျစှမျးနမှေ ကွညျ့လို့လှသလို ဆံပငျပုံစံ သပျသပျရပျရပျရှိခွငျးက လူတဈယောကျအတှကျ တကယျကို အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမတို့အနနေဲ့ တဈခါတဈရံမှာ ဆံပငျနဲ့ ပတျသကျလို့ အလိုမကရြတာ၊ စိတျရှုပျ စိတျညဈရတာ အမြားကွီးပါ။ အထူးသဖွငျ့ ဆံသားပကျြစီးမှဲခွောကျတာက အဖွဈအမြားဆုံးပေါ့။ ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ ဟိုဟာကောငျးနိုး၊ ဒီဟာကောငျးနိုးနဲ့ လိုကျစမျးရငျး ထိထိရောကျရောကျ မဖွဈတာတှလေညျး ကွုံဖူးကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီပွဿနာကို ဖွရှေငျးဖို့ ဒိနျခဉျြ ရှိရငျကို လုံလောကျပါပွီ။ ဒိနျခဉျြ တဈမြိုးတညျးနဲ့ တကယျအလုပျဖွဈပါ့မလား။ ကဲ..စမျးသပျကွညျ့လိုကျရအောငျ။
လိုအပျတဲ့ပါဝငျပစ်စညျးတှကေ ကိုယျရဲ့ ဆံပငျအနအေထားနဲ့ လုံလောကျမယျ့ ဒိနျခဉျြစဈစဈ (သကွားရညျ၊ပြားရညျ စတဲ့ အခြိုတှေ မရောထားတဲ့ သီးသနျ့ ဒိနျခဉျြအနှဈ) ၊ကိုယျ သုံးနကြေ Shampoo and conditioner ပဲ လိုပါတယျ။
နညျးလမျးကတော့ အရငျဆုံး ခေါငျးမလြှျောခငျ တဈခေါငျးလုံးကို ဒိနျခဉျြ ခပျထူထူလိမျးရပါမယျ။အထူးသဖွငျ့ ပကျြစီးနပွေီး နှဈခှဖွဈတတျတဲ့ အဖြားတှကေို ခပျထူထူလေးလိမျးပေးရမှာ ဖွဈသလို လိမျးသှားပွီးရငျ မိနဈ ၂၀ လောကျ Shower Cap လေးဆောငျးပွီး ပေါငျးထားပေးပါ။ ဒိနျခဉျြတှကေ စီးကပြွီး မကျြလုံးထဲဝငျရငျ စပျတတျလို့ Shower Cap သခြောအုပျပွီး ပေါငျးတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
မိနဈ ၂၀ ပွညျ့သှားရငျတော့ ဒိနျခဉျြတှေ ပွောငျစငျအောငျ ရတေဈထပျနဲ့ ဆေးခလြိုကျပါ။ ပွီးမှ ကိုယျသုံးနကြေ ခေါငျးလြှျောရညျနဲ့ ပွောငျစငျအောငျ ခေါငျးလြှျောခရြပါမယျ။ ပိုပွီး ကောငျးမှနျခငျြရငျတော့ သုံးနကြေ Conditioner လေးနဲ့ ခဏ ထပျပေါငျးပေးလိုကျပါ။ ခေါငျးလြှျောပွီးdryerမှုတျတဲ့အခါ ပုံသှငျးစရာမလိုဘဲဆံသားက ပုံကသြှားသလို ပွောငျပွောငျစငျးစငျးအိအိလေး ဖွဈသှားစပေါတယျ။ ဆံပငျအဖြားက ကွမျးတမျးတာတှလေညျး လြော့ပါးသှားသလို တပတျတခါ ပုံမှနျလုပျပေးရငျ ဆံပငျကြှတျတာလညျး သကျသာလာတာ တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ဒီနညျးလမျးက တကယျကိုထိရောကျသလို အကုနျအကလြညျး သကျသာ၊အခြိနျလညျး မြားမြားမပေးရလို့ လုပျကို လုပျကွညျ့သငျ့တယျလို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျနျော။
4G ထက်ပိုမိုဆန်းသစ်ပြီး 5G အသွား ခရီးလမ်းကို ပံ့ပိုးနေတဲ့ 4.5G
by Naing Linn .2weeks ago
ဒီ Plastic Challenge ကို ဘယျသူတှေ Accepted လုပျပွီးကွပွီလဲ
by Ngul Ciin .4weeks ago
by Naw Hsel Hte .4weeks ago
အနာအဆာဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို လျှော့ချခြင်း နည်းလမ်းနဲ့ အရင်ကယ်တင်ရအောင်
by Ngul Ciin . 1 month ago
အိမ်သာဘိုထိုင်ခုံထက် ပိုညစ်ပတ်တဲ့ သင့်အနီးအနားက အရာတွေ (၂)
ငါတို့တွေဘာလို့ Road Trip ထွက်သင့်တာလဲ